Version 0.4.2 – Jawaabta waxay?
January 26, 2010 by dalabyo 14 Comments
Maxay ahayd su'aasha? Qof kasta?
Waxaa laga yaabaa – Miyuu turjumaad taageero version this ka soo Hayshiyan? Haa
Waxaa laga yaabaa – Bing Translate waxaa loo isticmaali karaa si ay auto turjumi? Haa
Waxaa laga yaabaa – Miyaad dhammeeyo optimizations iyo hoos u script size si ay 1.5k marka gzipped (qaba daray)? Haa
Waxaan rajaynaynaa inaad ka mid ah ku raaxaysan doonaa sida ugu badan ee aanu qaban.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: Bing (msn) turjumaan, yaryar, luqado badan oo, sii daayo, uqaadineed xawaaraha, plugin wordpress
January 27, 2010 at 5:24 at the
Waad ku mahadsan tahay in la sii daayo this!
January 29, 2010 at 4:41 at the
Hi waxaan kuu soo bixin,
Waxaan kaliya qaar ka mid ah posted news ku saabsan waayo-aragnimo oo leh this version cusub ee Trac. Eeg marka aad awoodid…
Thanks for sii daayo this, waxaa ka shaqeeya ganaax halkan [waxaa weli qaar ka mid ah dhibaatooyin yar yar, laakiin waa OK], oo anigu waxaan ka fiirsaneysa inay deeq aad markii aan u hesho dakhliga goobta aan…
asaf chertkoff sheegay
ma aqaan sababta, laakiin calanka waxaa oo dhan mest ilaa in version 0.42 ...
Cibraaniga ayaa calanka ka mid ah qaar ka mid ah quruun kale,
iyo calanka Israel waa ag ayisyen kreyol luqadda, sabab qaar ka mid ah ...
CSS iyo calamada The files beddeleen, Reload ah bogga la wareeg + F5 waa in trick u sameeyaan. I ogaysii haddii ay u shaqayso, waana hubaa taa ma dhici doonto in versions mustaqbalka waxaan ka dhigi doonaa
Daniel True sheegay
Haitian cusub uma shaqeeyo on my site. All kale aan ku rakibtay shuqul qaban. Talooyin kasta?
Waa in aad leedahay fure u tahay turjumaan MSN ka (arki link in goobaha bogga) turjumaad auto for this kaliya ee furaha this shaqayn doona (muhiimka ah ee ay tahay waxa ay u muuqataa ka dib appId=, in kiiskaaga waa 1zIKzHh6jAQfUK_X5HQC7d2WCkcfGVAV)
January 30, 2010 at 2:04 at the
Haa, aad tahay gebi ahaanba sax ah, u muuqataa sida loading async ka qarxay qaar ka mid ah arrimaha waafaqid adag dabacsan.
Waxaan u darabnay dhalato a, iyo in svn ah, Anigu waxaan idiin soo diri waxa waa in ay ahaataa karriin shaqeeyo, waxaana rajeynayaa in ay noqon doonto ganaax.
Haddii qof kasta oo kale waa dhibaato sida, ha ka cabsan in ila soo xiriir.
Waad ku mahadsan tahay this plugin waxtar leh. Waxaan u isticmaalaa, waxaana qabaa dhibaato jirto waxaan la kulmi on RSS feed markii aan u isticmaalno la URLs dib u qorid.
Waa maxay dhibaatada?
Dhibaatada xalin saabsan RSS feed, laakiin waxaan weli ma u isticmaali karaa becausi xasuusta daallan. Waxaa laga yaabaa in uu la xiriira server xaddidaadda xasuusta.
u maleeyay sheegay
February 15, 2010 at 6:35 at the
Waxaan u leeyihiin in ay gab Transposh sababtoo ah waxa aanu sidoo kale la Links Pretty plugin shaqeeyaan.
Waxay ka dhigaysa farabadan of 404 links by daray code dalka u Links Pretty. Ex: mydomain.com/my-short-link noqon mydomain.com/en/my-short-link.
Haddaba i leeyihiin 1200+ pages lagama helin aan Tools Webmaster Google.
February 15, 2010 at 8:30 at the
Fadlan si plugin in diro si toos ah link a, Waxa kale oo – Dhanka kale in aad isku dayi kartaa naafada permalinks si bogagga turjumay isticmaali doonaa param ah sida lang = en
December 29, 2011 at 11:53 at the
dhalato A sharikadaha i helay in ay dhibaato ku xusan waa ay ku daray www hor magacyada domain aan, iyo in kiiska www jirta horay u saar.
Jidka Transposh Tani jebin jecla ah links gaaban abuuray by Links Pretty
Changeset in Transposh-WordPress [f5552f2]: Add support for FQDN rel alternate. Remove update check block on ... June 17, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [1437f05]: Fix parser to support fqdn alternate hreflang June 17, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [5e28fc3]: v1.0.0 release is imminent June 15, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [bece739]: Update for .js license files, and now those are not included in ... June 15, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [bc68f19]: UI Theme is a part of the wporg version too June 14, 2018